Indawo yokubalekela kwifama yamahashe, ifama yaseBryn Taran
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJudith
Indawo yasemaphandleni; kodwa ukuqhuba ngokukhawuleza kwiindawo eziphambili zembali kunye nezolonwabo kunye neziganeko. Indawo yokuhlala yabucala neyabucala ekufuphi nendlu yasefama eneminyaka engama-275 ubudala. Ibandakanya ivaranda ebanzi eneendawo zokuhlala kunye netafile yokutyela ngaphandle ejonge igadi, amabala amahashe kunye nebhari eyimbali. Unomnyango wabucala wendawo yakho yokuhlala entle enazo zonke izinto zangoku, kubandakanya izixhobo zasekhitshini ezinobungakanani obugcweleyo, indawo enkulu yokutyela enombono wangaphandle kunye negumbi lokulala elibanzi elinegumbi lokuhlambela kunye neshawari.
Le yipropathi yasefama apho sifuya khona, sikhulisa kwaye siqeqeshe amahashe kunye neeponi kunye nokubonelela ngokukhwela, izifundo, uqeqesho kunye noqeqesho kwabo bathanda amahashe. Ikwindlela ezolileyo yasemaphandleni kodwa ikufuphi nemithambo emikhulu. Uya kuhlala kwindlu yabucala ekumgangatho ophantsi encanyathiselwe, kodwa engaqhagamshelwanga, kwikhaya lethu lembali lamatye. Ihonjiswe ngokumnandi, Inazo zonke izinto ezihlaziyiweyo kwaye inegumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokutyela enobungakanani obuhle enombono omkhulu; Igumbi lokulala elinobungakanani obugcweleyo kunye negumbi lokuhlambela elikhulu le-en-suite elibonisa amampunge aphindwe kabini, ubushushu obuncedisayo, kunye neshawari ebanzi kakhulu enokuhlala abantu ababini. Indawo yokungena kunye neyokuhlala nayo iyafikeleleka kwaye ifanelekile kwizilwanyana zenkonzo. Nangona, ngelishwa, ayifanelekanga ukuzisa izilwanyana zakho zasekhaya.
Le yipropathi yasefama apho sifuya khona, sikhulisa kwaye siqeqeshe amahashe kunye neeponi kunye nokubonelela ngokukhwela, izifundo, uqeqesho kunye noqeqesho kwabo bathanda amahashe. Umhlaba wethu uquka amathafa kunye namachweba alikhaya leentlobo ngeentlobo zezilwanyana zasendle. Ikwindlela ethe cwaka yasemaphandleni kodwa ingaphantsi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba ukufikelela kwimithambo emikhulu kunye nomgama wokuhamba ukuya kwivenkile yasefama egcweleyo.
Abanini zindlu bahlala kwaye basebenza kule dilesi. Nangona uya kuba nobumfihlo obuninzi obuthandayo, sihlala sijikeleze kwaye siyafumaneka kwaye sinokufikelelwa ngokuthe ngqo kwisixhobo sakho esiphathwayo okanye uze unkqonkqoze kumnyango wethu. Ukuba unemibuzo, udinga nantoni na, uya kusifumana kulula ukuthetha naye kwaye sinomdla wokunceda. Sigonyelwe ngokupheleleyo intsholongwane ye-COVID kwaye sinethemba lokuba nawe unjalo.
Ukuba ukhetha ungangena kwigumbi lokuhlala ngqo xa ufika ngaphandle konxibelelwano loluntu. -OKANYE -ngesicelo sakho, siyakubulisa - (ngaphandle, ngelixa ulandela izikhokelo zangoku ze-COVID) kwaye sikwazisa ngokufutshane kakhulu ngefama, izinto eziluncedo, indlela izinto ezisebenza ngayo, kwaye ukuba uyathanda, iinjana zethu ezi-3 zase-Italiyane ezingwevu.
Abanini zindlu bahlala kwaye basebenza kule dilesi. Nangona uya kuba nobumfihlo obuninzi obuthandayo, sihlala sijikeleze kwaye siyafumaneka kwaye sinokufikelelwa ngokuthe ngqo kwis…